Sisiphi isilwanyana esifanelekileyo kuwe
Ngaba udidekile yintoni na isilwanyana ozofumana? Kuyathakazelisa ukuba abantu banokuhlulwa kwiindidi eziliqela kuye kuxhomekeke kwisimo sabo sengqondo kwizilwanyana. Sinjani na kwaye kutheni sikhetha ngokunyanisekileyo isilwanyana sethu kwaye ngenxa yintoni ukufaniswa kwabanikazi kunye neemfuyo ezifuywayo?
Ngaba akuyinto ehlekisayo, inja okanye ikati, i-parrot okanye i-iguana, eqinisweni, ayitshintshi ukubukeka kwayo ngexesha lobomi. Kuvela ukuba sikhetha intuitively irhamncwa yohlobo olumnandi kakhulu kuthi.
Thina emva koko sonke sinqwenela ukubonakalisa kwisibuko, nangona sivakala, asikwazi ukuqonda ubuhle beendlebe ezide kunye nokunqunyulwa kwamehlo. Sithenga kuphela imali kwaye andinakuphikisana nesi sihloko. Ngoko kuvela ukuba ezi zizilwanyana ezifuywayo ngathi, kodwa sizo kuzo. Kwakhona kubaluleke kakhulu kukuvakalelwa komncedisi. Izilwanyana zikwazi ukuziva imeko yethu kwaye zibuhlungu kunye nathi okanye, ngokuchaseneyo, zivuyiswe ngathi. Ukongeza kwintshukumo yesikhashana, umlingiswa wezilwanyana kunye nomlingisi wethu kubalulekile. Konke oku kwenzeka kwinqanaba elingaziwa kuthi, xa ngaphakathi kwethu ilizwi lithi le yilwanyana efana nathi esiyifumana ngayo. Ngokwalo mgaqo, abantu bahlulwe ngamacandelo amaninzi:
1. Umfanekiso - konke
Iingcali zengqondo zibiza abantu abanjalo abantu abonakalisiweyo. Xa befumana isilwanyana, okokuqala qaphele ukubonakala kwayo. Isilwanyana akufanele nje sibe mnandi kwaye sibe nomusa okanye, umzekelo, ukungathobeli ukuhamba, kodwa kufuneka kube ngumkhangeli. Abantu abanjalo baqonda ukuba isilwanyana sinokufikelela kunokuba ngumhlobo. Ngokukhawuleza unike umzekelo: i-parrot eqaqambileyo, imbala engaqhelekanga, intlanzi ekhanyayo; kwaye ukuba inja okanye ikati, kufuneka ukuba ibe uhlobo oluthile olungabonakaliyo. Kwakhona akukho nto ebaluleke kangakanani ukuba imfashini yile okanye isilwanyana. Khawukhumbule nje ukuba iminyaka embalwa edlulileyo inkwenkwezi yeenkwenkwezi zazizinja ezincinci ezigcinwe ngesandla ezifanelekileyo kwiimali zazo. Emva koogqirha abathandana nabo behamba kunye neendlela zokuhamba, abafazi baqala ukuthenga i-chihuahua, i-Yorkshire terriers, i-spitz, i-griffins, i-toy terriers kunye ne-Maltese bolonok. Le nkomo ifana nomhlobiso kumnini, malunga nokuba umntu ukhumbula kanini kuphela xa kufika iindwendwe. Ngenhlanhla, iindwendwe kwizindlu ezinjalo zihlala zihlala. Izilwanyana, ngendlela, kufuneka ukuba zinezizukulwana, kuba abanikazi babo bahlukaniswa yimeko yezemali eqinile. Nantsi enye into yokufana.
2. Umhlobo womntu wenja
Xa umntu efuna ukuthetha nomntu ongeke anike iingcebiso ezingadingekile, ukuhleba okanye ukugweba, uxoxisana nesilwanyana. Umntu udinga ukunxibelelana nokuvunywa. Kuya kuba luleke kakhulu kuye ukubona isilwanyana esihlangana nayo yonke imini nobusuku kwaye siva ukuvuya kwakhe, ukugubha, ukuphikisa okanye ukuphazamisa. Ngolu hlobo ngabazalwana abancinci, umntu uqala ukufunda iimpawu zakhe, izimvo, ukuziphatha kunye nokuzikopisha. Xa umntu onjalo kwindlu ingaba inja ephosiweyo, kunye nekati yasekhaya, kunye nejuba eliye laphuma kwiqabunga lewindi. Ukufana phakathi kwabo kuboniswa kumlingiswa.
3. I-Frivolous exotic
Kuhlobo olukhethekileyo ngabo bantu basemakhaya bangakwazi ukulungisa i-toad okanye i-cockroach, ama-frogs, iinyoka okanye iimpethu ngeentlola. Abayidingi i-caress, ingqalelo. Bayibukele ebomini. Kule meko, abantu baxelelwa ngabantu malunga nokuthula kwabo sele besethetha. Bayazincama kakhulu ngokuthetha kunye kwaye bangahamba ngeenyanga. Izilwanyana zabo azizithobekanga, kuba zichitha ixesha elincinci lokuzisondeza: ziyondla ukutya, kwaye isilwanyana sizondla sona, sidla ngokukhawuleza kwaye nanini na xa sifuna.
4. Abantu abakhutheleyo
Abantu abanjalo baqala izilwanyana ngenjongo ethile. Bamele banakekele umntu. Zizele ngokugcwele ubomi, amandla, ukuba zikulungele ukuhamba iintsuku nobusuku babo ebusuku, ukuqeqesha, ukukhahlela, ukuhlamba, ukudlala ... Ukuba inja, ibolile ukuya kwinqanaba, kwaye ikati idlala. Iiproti ziqeqesha ngentetho, kwaye iigundane zifundiswa ukuba zijikeleze kwivili.
5. Ukuzala kunye nobuso
Ukuba ufuna i-muzzle yakho ibe neempawu ezifana nobuso bakho, ngoko kufuneka wenze isigqibo malunga nohlobo lokubonakala kunye nokuzala. Vumelana ukuba xa isilwanyana sifana nenkosi, ihlala ibangela ukunyamekela kunye nokumomotheka kwezitalato. Ngaba akukuhle ukuba ube ngumtsalane omhle xa usondelene nesilwanyana sakho?
Ukuba unesimo somfanekiso wesibhakabhaka kunye nesibalo esifumanekayo, ke ubeke ingqalelo kwi-bulldogs, umzekelo waseMelika okanye isiNgesi. Benza ukucinga kwamandla, amandla kunye nokuzimisela. Ngelo xesha, banobubele kwaye balinganisekile, kunzima ukukhupha. Abayikwesibindi kwaye banesibindi, kwaye baqeqeshwa. Ukubonakala kubaluleke kakhulu. Ngokomzekelo, i-Boston terrier, eyayisakuba yinkomo ye-bull bull yaseMerika, inja encinci ehambahambayo encinane enekhamera yesikwere kwaye ikumangaliswe indlebe.
Abanikazi bomsebenzi obude, obunamathelwano banokuzonwabisa kunye ne-basset hounds kunye negazi. Zibuhlungu ngokubonakalayo, kodwa zinobubele entliziyweni. Ngendlela, ukuba uyathintela kwaye unengqondo - izinja zalolu hlobo ziya kulandela. Zinempawu ezifanayo. I-Weimaraner yokucinga kunye neDoberman nayo inemipu engaphezulu.
Ukuba iqhayiya lakho lide kwaye lizinwele kwaye ufuna ukuba nenja ende enomfono obuninzi obunokubonakala kunye nokuziphakamisa, ukhangele ezinye iintlobo zee-collies, i-retriever ene-haired straight, i-Afghan hound.
Ngaba unwele iinwele? Khangela i-Russian doggy greyhound. Inwele yakhe ingumtsalane omhle, kunye ne-komondory - abakhuseli abathembekileyo kunye nabanikazi beenwele eziluhlaza. Oko ungathetha ngeempawu ezintle, ezinwele zakhe zinjengemvume. Kananjalo nikela ingqalelo kwi-sparkels cocker.
Abafaki bezinwele ezintle ezinjengebhola banokutsala i-shar pei, i-bichon ikhupha, i-chow-chow. Iimbobo zabo ezijikelezayo zijikelezwe ngobisi obunzima kangangokuba iinja zibukeka zifana neebhola, zincinci kwaye zihlutha.
Ukuba unezinwele ezimfutshane, uya kuthanda i-Australian terrier, i-yaggie terrier, enoboya bayo bufutshane kwaye bukhuni; ngeenwele ezimfutshane kakhulu okanye intloko eboyiweyo - chihuahua, inja kaFaro.
Abantu abancinci baya kuhanjelwa ngeenja ezincinci ezifana neHinishi yaseJapan, e-west terrier white, zwerkschnauzer, whippet.
Ukukhetha ikati, sincike kakhulu kumbala wayo kunye nobude beengubo. Inyaniso kukuba iintlobo ezininzi zinemibala eyahlukileyo kunye nobude obuhlukeneyo beboya, ngoko kunzima ukucebisa uhlobo oluthile, kuba zonke iinguqu zalo azikwazi ukuqwalaselwa. Ngako oko, kungcono ukudibanisa nabalandeli abangaphandle: Uyakuthanda ikati yaseBangal efana nengwe nombala wayo, ikati yaseMpumalanga ephethe umbhobho odibeneyo, iindlebe ezinkulu kunye nemicu emnyama ebanzi kulo lonke umzimba, i-sphinxes, i-spinxes, i-Kurilian i-cocktail ngaphandle komsila okanye, umzekelo, ijikiweyo kwii-curtic curls.
Ukubuya ngokuhlwa ngokubuya emsebenzini, epakini, ndagijimla kwisibini esithile: indoda eyayimdala kunami yayihambahamba kum, yayine-leash ezandleni zayo, ibhekisela kwisigqubuthelo sayo esifutshane. Uboya beenja bekungakhange bubuhlungu njengenwele yendoda. Umnini kunye nesilwanyana ehambahamba, esincinci, emlenzeni wesokudla kunye nepow. Ngesizathu esithile abazange bavuse ithemba lam, kwaye, ngokusobala, kungekhona ngethuba. Kwafuneka ndinike indlela, inja yandiqhayisa kancinci, kwaye umphathi wenyuka wenyuka, wandiqhayisa. Uyabona, azikho indawo ezaneleyo kuzo. Kuba mna, ndabona ukuba inja kunye nomntu kwakufana kakhulu, zombini ngemikhwa yabo, nangaphandle. Kuyathakazelisa, kodwa ngubani kumalungu entsapho eyenza ikati yam uGavryusha ibonakale ngathi kwaye ngubani onomlingiswa onjalo? Umbuzo kukuba, kunjalo, kunzima ...
Indlela yokunyamekela iifudu zasekhaya
Izifo ezithintekayo zezilwanyana
Ukuziphatha kweekati zasekhaya
Inja yokuzala inja yaseCaucasian inja
Ukuzala kweekati: iSt. Petersburg i-masquerade
Konke malunga nenja yaseBordeaux
I-mini-pi: ihagu elimnandi kwintsapho
ICream ekhangayo yabasetyhini
Ukufakelwa kwamazinyo: indleko kunye nokuhlaziywa
I-Horoscope ngo-2010 yeSagittarius, eyazalwa ngonyaka we-Tiger
Abazalwana bakaMaladze baphuma kunye nabafazi abancinci
Indlela yokukhawuleza ukujoyina iqela elitsha
Izindlela zokufumana ingcambu yegolide
Ukufakelwa kwemfuyo ye-ovum, ukukhutshwa, iimpawu zokukhulelwa
Ngaba i-multiple sclerosis iphilisa?
Pesto di Nochi
Imbali yokudala izicathulo
Ezinye iingcebiso zokulahlekelwa ubunzima emacaleni nasesisu
Iibhaki zebhayiki kunye neesekhisi
Iilungiso zomntu zokucoca iimveliso zesikhumba
Uhlobo oluhle olusesikolweni
Kutheni iimpukane ziphupha?
Intsapho yam yangaphambili isele enye